၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတ တိုက်တွန်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတ တိုက်တွန်း
epa05319396 epa05319390 Myanmar President U Htin Kyaw attendsaplenary session of the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Sochi, Russia, 20 May 2016. Sochi hosts ASEAN-Russia Commemorative Summit on 19-20 May. EPA/HOST PHOTO AGENCY/POOL EPA/HOST PHOTO AGENCY/POOL
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတ တိုက်တွန်း
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက် ပေးပို့တဲ့ သ၀ဏ်လွှာမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကို သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က တိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံချက် ပေးနိုင်တဲ့ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်နိုင်မယ့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ဆောက်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဆက်လက် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းသွားဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ပေါ်ထွက်လာဖို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၇၁ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ကို ပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာမှာ ပြောကြားခဲ့သလို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းမှာလည်း ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရာမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျဖို့ သမ်မတ တိုကျတှနျး
၂၀၁၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရာမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျဖို့ ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ ခငျြးအမြိုးသားနအေ့တှကျ ပေးပို့တဲ့ သဝဏျလှာမှာ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှကေို သမ်မတ ဦးထငျကြျောက တိုကျတှနျးပွောကွားပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှေ လိုလားတောငျ့တနတေဲ့ တနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ကို အာမခံခကျြ ပေးနိုငျတဲ့ အနာဂတျဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစုကို ခိုငျမာစှာ တညျဆောကျနိုငျမယျ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးကို ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျ၊ နိုငျငံရေး ဆှေးနှေးပှဲနဲ့ ဆောကျရှကျခဲ့ရာမှာ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှေ အနနေဲ့ ဆကျလကျ ပူးပေါငျးကွိုးပမျးသှားဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သမ်မတ ဦးထငျကြျောက ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒသေဈ ပျေါထှကျလာဖို့ ဖဖေျောဝါရီလ ၇ ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ ၇၁ နှဈမွောကျ ရှမျးပွညျနယျနကေို့ ပေးပို့တဲ့ သဝဏျလှာမှာ ပွောကွားခဲ့သလို ၂၀၁၈ ခုနှဈ နှဈသဈကူး မိနျ့ခှနျးမှာလညျး ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။
Previous articleဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်မှာ ရေခဲပြင် အလှကပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေ ဝတ်စုံကြောင့် အရှက်ကွဲ
Next articleတစ်ရက်တည်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မူးယစ်ဆေး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု ၄ မှု ဖမ်းမိ